Ahoana ny fomba ahafahana mamadika ny tranokalanao?
Ny rafitra rehetra dia mifototra amin'ny backlinks. Izany no mahatonga ireo rohy ekena amin'ny tranokalanao sy ny rohy anaty anatiny hikatsaka foana. Tokony ho lafiny manan-danja amin'ny tetikady ara-barotra amin'ny Internet ianao raha manao ny asanao an-tserasera ao amin'ny tranonkala. Andeha isika hiresaka momba ny fomba hamerenana ny tranokalanao amin'ny fomba tsotra sy mahomby.
Ahoana no hamerenana ny tranokalanao?
Misy fomba tsotra ahafahana manangana backlinks izay mifanaraka amin'ny toro-làlan'ny Google. Azonao atao ny manaraka ireo dingana ireo mba hampivoarana tetikady fanorenana maimaim-poana sy mahomby.
Voalohany indrindra, tokony hanorina fifandraisana akaiky amin'ny tranonkala manerantany ianao. Tsy asa sarotra izany satria ny mpikirakira tranonkala matetika dia manaiky ny hanafoanana azy ireo raha manolotra azy ireo eo amin'ny lafiny fiaraha-miasa eo amin'ny fiarahamonina. Ohatra, ny loharanom-baovao na fanabeazana dia manaiky ny hamoaka lahatsoratra izay mitondra fampahalalana sarobidy ho an'ny mpamaky azy maimaim-poana. Raha te haka fitohanana amin'ny backlinks izay mametraka anao amin'ny loharano hafa ianao, dia ataovy azo antoka fa ny votoatinao dia tsy mitongilana amin'ny dokam-barotra ary mitondra fampahalalana sarobidy ho an'ny fampahalalana mety ho an'ny mpanjifa.
Ny dingana hafa dia ny fampiasana ireo teny izay mifandray amin'ny orinasa na vokatrao. Miantehitra tsara amin'ny lahatsoratry ny backlinks vatonao. Ny tsara indrindra dia tokony hiantefa tahaka ny tenimiafinao ifarimbonana ianao. Amin'ny fomba toy izany, dia mampiakatra avo roa heny ny mety hisian'ny fifamoivoizana amin'ity rohy ity.
Ankoatra izany, mila mifandray amin'ny tranokala hafa ianao ao amin'ny indostria, satria manome fahafahana tonga lafatra ho anao sy ny mpiara-miasa aminao ny fandraisana ny tombontsoa iombonana amin'ny rohy fanorenana.
Araka ny nambarako mialoha ny votoatin'ny kalitao momba ny fanentanana fananganana rindrambaiko mahomby dia ny MUST! Raha toa ka misy lanjany ho an'ny mpamaky ny votoaty iray azonao, dia mety ho zaraina amin'izy ireo izany. Amin'ny fananganana votoaty entin-tanana, dia raisinao ny fahafahanao hahazo vongam-bokatra bebe kokoa ary hampitombo ny fahatsiarovanao ny marika.
Ary amin'ny farany, ambarao ny marika izay anangonanao ny fanantenanao an-tserasera. Azo atao ny manangana sehatra Page tsy amin'ny fanampian'ny rohy dofollow. Azo atao ihany koa ny fifamoivoizana. Mba hahafantarana ny mety ho an'ny mpanjifanao mety aminao, dia manontania tena hoe aiza no misy azy ireo. Ohatra, raha toa ianao ka mihazakazaka fanentanana ara-dizitaly, ireo mpampiasa izay mety sahirana amin'ny serivanao dia napetraka ao anaty sehatra samihafa mifandraika amin'ny e-varotra sy tsena dizitaly, blaogy momba ny varotra an-tserasera sy ny vondrom-piarahamonin'ireo mpikirakira Internet. Noho izany, mila mifandray amin'olona amin'ny sehatra toy izany ianao mba hananganana fifandraisana ara-barotra sasany aminy.
Torohevitra mandaitra ihany koa ny mandefa ny tranonkalanao ho an'ny feedback. Ampidiro ny tranokalanao amin'ny famaritana fohy momba ny fomba hanatsarana azy. Hahazo torohevitra mahasoa ianao, ary misy rohy vitsivitsy.
Ankoatra izany, manoro hevitra anao aho hampiditra loharano web ho an'ny mpangataka iray izay mametraka ny blôgy tsara tarehy amin'ny orinasa isan-karazany. Ampidiro ny tranonkalanao ary raha vao mahazo fankatoavana ianao dia mahazo rohy manaraka Source .